Haweeney masiixiyad Somali ah oo lagu dilay Gaalkacyo. – Radio Daljir
Haweeney masiixiyad Somali ah oo lagu dilay Gaalkacyo.
Oktoobar 28, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Oct 28 – Wakaalad wararka u faafisa masiixiyiinta oo la yidhaahdo Compass Direct News ayaa maanta sheegtay in koox diimeedka Ahlu sunna waljameeca ee hubaysan ay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dileen haweeney Soomaaliyad ah oo haysatay diinta Masiixiga ah oo lagu magacaabo Aamina Muuse Cali, taasoo da?deeda lagu sheegey 45 jir.
Warkan oo lagu qoray mareeg kale oo ay Kirishtanku iska leeyihiin lana yidhaahdo BosNewsLife ayaa lagu sheegey in Aamina Muuse ay sheegtay in hanjabaado ay heleysey ku aaddanaa in la dili doono isla markaana la farayay in ay qaadato Jalaabiibka ay diinta islaamku fartay haweenka Muslimiinta ah. Aamina ka hor intii aan la dilin waxa ay sheegtay in lala socday dhaqdhaqaaqyadeeda.
Wakaaladda wararka Masiixiyiinta ee Compass Direct News waxa ay sheegtay in Aamina Muuse Cali ay sanadkii 1997dii ku biirtay urur masiixiyiin ah oo si qarsoodi ah uga jira Soomaaliya oo la yidhaahdo Ururka Walaalaha Soomaalida Kirishtanka ah, kaasoo gudaha dalka Soomaaliyana looga yaqaanay urur waddani ah oo ay bulshadu leeyihiin, waxana ay gabadhani xubin firfircoon ka ahayd kiniisad qarsoodi ah oo dhulka hoostiisa ku taalla oo ka jirta gobolka Jubbada hoose, sida ay sheegtay wakaaladda wararka kirishtanka ee Compass Direct News, isla markaana lagu qoray bogga Masiixiyiinta ee BosNewsLife.
Waxaa indhawayd soo baxayay warar tibaaxayay in ay Soomaaliya si qarsoodi ah uga jireen kooxo masiixiyiin ah, oo kiniisado qarsoodi ahna dalka gudihiisa ku lahaa, kaddib markii bilihii tagay oo dhanba ay ururro masiixiyiin ah sheegayeen in xubno ay diin wadaag yihiin oo Soomaali ah ay ururo diimeedyada Islaamiyiinta ah ee ka dagaallamaya Soomaaliya ay laayeen.
Bishii September waxaa ay ururka Alshabaab ku dileen meel 10km u jirta magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha hoose 69 jir Masiixi ah, Cumar Khalafe ayaa lagu qabtay kutubta Baaybalka ee Masiixiyadda oo ku turjunnaa afka Soomaaliga, waxana uu khaadin wayn ka ahaa Cumar kiniisad ay masiixiyiin Soomaali ah ku leeyihiin meel dahsoon gudaha shabeelaha hoose.
Bishii Ogost-na Ururka Alshabaab waxa ay magaalada Beledxaawo ku dileen nin 41 jir ah oo galay diinta kirishtanka kaasoo lagu magacaabi jiray Axmed Mataan.
10kii July-na Ururuka Alshabaab waxa ay kurka ka jareen 7 nin oo lagu eedeeyey in ay ka bexeen diinta Islaamka isla markaana ay masiixiyoobeen magaalda Baydhabo.
Iska-horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay oo maanta ka dhacay magaalada Galkacyo.
Duqa magaalda Buuhoodle oo cambaareeyey hadal ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe. [Dhegaysi …]